एन्टिबायोटिक प्रयोगमा कहाँ चुकिरहेका छन् बिरामी, औषधि पसले र किसान ?
यो आमप्रवृत्ति हो। यसलाई बदल्नु जरुरी छ। किन औषधि बिचमै छाड्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ग्लोबल एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स पाटर्नसिप कार्यक्रमका निर्देशक डा. सुन्दरमणि दीक्षित यसरी बुझाउँछन्, ‘मानौं, हाम्रो शरीरमा एक सयवटा ब्याक्टेरिया छन्। ५ दिन औषधी खाँदा सबै मर्छन् भन्ने लेखाजोखा चिकित्सकको छ। तीन दिन खाँदा ८० वटा मर्छन्। त्यति मरेपछि बिरामीलाई सञ्चो भएको महशुस हुन्छ तर २० ब्याक्टेरिया जिउँदै वा लट्ठिएका हुन्छन्। यसरी हेर्दा ८० वटाको अस्तित्व समाप्त भयो तर २० बाँकी हुन्छन्।’ उनका अनुसार बाँकी २० वटा ब्याक्टेरिया तत्काल केही गर्न नसकी निस्क्रिय बस्छन्। तर, उनीहरुले आफूलाई सिध्याउन पठाइएको हतियार (एन्टिबायोटिक) देखिसकेका हुन्छन्, अर्कोचोटि सोही हतियार प्रयोग हुँदा कसरी जोगिने भनेर आफूलाई तयार गर्छन्।'
उनका अनुसार ब्याक्टेरियामा अचम्मको क्षमता हुन्छ। त्यो हो, अन्य ब्याक्टेरियालाई पनि उक्त हतियारलाई परास्त गर्न आफूले सिकेको कुरा सिकाउने र आफ्ना शाखासन्तानलाई पनि आफूजस्तै बलियो बनाएर जन्माउने। यसरी एकपटक एन्टिबायोटिक खेपेको ब्याक्टेरियाले दोस्रोपल्ट बिरामीले सोही एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्यो। भने सुरुमै रोकिदिन्छ। त्यसपछि बिरामीलाई लाग्छ, ‘औषधी त खाएकै छु नि किन निको भइनँ।’ यसरी अन्तिम लाइनसम्मकै एन्टिबायोटिक लिइसकेको बिरामीको शरीरमा रहेका ब्याक्टेरियालाई मार्ने उपाय हुँदैन। जसलाई एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनिन्छ। त्यसपछि बिरामीको ज्यान तलमाथि पर्छ।
औषधी पसलले बेच्छन् कडा एन्टिबायोटिक
एन्टिबायोटिकमाथि औषधी पसलेको लापरबाही यहीँनेर टुंगिँदैन। अाइसियु तथा छातिरोग विशेषज्ञ डा. अर्जुन कार्की बिरामीसँग जति रुपैयाँ छ, औषधी पसलले त्यत्ति रुपैयाँको एन्टिबायोटिक भिडाएर पठाउने गरेको बताउँछन्। उनी उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्, ‘बिरामी ७ दिन खाने कुनै एन्टिबायोटिक किन्न फार्मेसी पुग्छ। मानौं, त्यसको मूल्य ६ सय ६५ रुपैयाँ पर्छ। तर, बिरामीले आफूसँग तीन सय रुपैयाँ मात्रै रहेको बताउँछ। औषधी पसलेले तीन सय रुपैयाँकै दिएर पठाउँछ। त्यति औषधि खाइसक्दा, बिरामीलाई सञ्चो भएजस्तो हुन्छ। थप औषधि खान छाड्छ। डोज पूरा नभएकाले अर्को चोटि उक्त बिरामीलाई त्यो एन्टिबायोटिकले छुँदैन।’
एन्टिबायोटिकको प्रयोगमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही
बलियो बन्दै ब्याक्टेरिया, प्रभावहीन हुँदै एन्टिबायोटिक